Bukela iMadison kunye neVictoria's Awkward 'Bachelor' Deleted Scene - Iindaba
Umindiya Ukuhombisa Celeb Jonga Ekhaya Imisebenzi Kunye Nemali Gynaec Ukomelela Ifashoni Yomtshato Itekhnoloji Uhlobo Lweceleb
Kanye Xa Ucinga Izinto azinakuba nzima kwi-'Bachelor, 'le Madison kunye neVictoria isuse imeko
* Isilumkiso: Abaphangi ngaphambili *
Ukusondela kwethu esiphelweni sexesha likaPeter Weber Isidanga sokuqala , izinto ezingathandekiyo ziya zisiba. Kwimeko efanelekileyo? UChris Harrison kunye nabanye Isidanga amagunya ekugqitywe ngawo kuya kuba ngokwenene kumnandi ukwenza indawo kaMadison, iVictoria kunye neHana Ann kunye kunye nenxalenye yefantasy yenkqubo. Ngokucacileyo, umbono.) Ngokucacileyo, uxinzelelo lwaluphezulu kwiscreen, kodwa kuvela ukuba izinto zazingangqinelani kwimifanekiso engazange iboniswe.
I-ABC yabelane nje ngomfanekiso osusiweyo waseVictoria naseMadison befumana ikhadi lomhla kwaye bephendula ngokungahambi kakuhle. Kuyinyani ngokukufaneleyo ukuba ngekhe ufune ukuyibukela nangaphezulu.
Kwisiqeshana, abafazi bahleli kwigumbi lokuhlala kwigumbi labo lasehotele bencumile xa benkqonkqoza emnyango. UMadison uphendula athi, Ooo, ikhadi lomhla. Zombini zizenza uchulumanco, de uMadison avule imvulophu aze afunde, iVictoria, masivumele uthando lwethu luphakame ngaphezu kwayo yonke into -uPeter. Inkangeleko yobuso bukaMadison iphantse ngathi wayecinga ukuba kukho ithuba lokuba uVictoria angalifumani ikhadi lomhla. Nangona uVictoria esitsho kwicandelo lokuvuma ukuba ufuna [s] lo mhla noPeter kubi kakhulu. Kuninzi nje okungakumbi ekufuneka kuthethwe kwaye kuninzi nje okungakumbi ekufuneka kuqikelelwe ngaphambi kokuba sithethe ngokubandakanyeka, nokuba ujongeka ngathi uyafa ukuphuma kwelo gumbi.
Emva kokufumana ikhadi lomhla kaVictoria, uMadison wenza konke okusemandleni ukuba enze izinto kwaye onwabile kukhuphiswano, kodwa inkangeleko yobuso bakhe ithi konke. UVictoria uza ngomhla wangomso kwaye andinalwazi lokuba benzani kwaye ukuba bazokuya kwi-fantasy suite kunye nezigqibo abazakuzenza ngasemva kweminyango evaliweyo, utshilo. Andinaluvo. Okungaziwayo kuhlala kunzima. Unokusika uxinzelelo ngemela.
iimveliso zebhotolo yamandongomane esempilweni
Oku kuziva ngakumbi nangakumbi njengesepha opera yonke imihla kwaye siyayithanda. Fumanisa ukuba kwenzeka ntoni emva koko Isidanga sokuqala ubuya nomsitho wokugqibela werosi kunye nesiqendu sabaseTyhini abaXelela Bonke ngoMvulo, Matshi 2, ngo-8 ebusuku. PT / ET kwi-ABC.
Ezinxulumene : Ipesenteji yabalandeli abajonga uPeter Weber ukuba yiBachelor 'embi' yindlela ephezulu kunokuba sasicinga
Izigaba Amanqaku Omfazi Ombane Ulusu Uhlobo Lweceleb
iyeza lasekhaya lokuwa kweenwele
isiseko sokudibanisa ulusu
Igama lokutya kwamaTshayina
isitayela sokusika iinwele ngaphambili kumantombazana aseIndiya
abahlobo abakhulu bafana
Uyisebenzisa kanjani ioyile yealmondi ngeenwele